ကိုယ်အလေးချိန် ချနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်းကို ဒေါ်လာ ၁၄ဒေါ်လာစီမုန့်ဖိုးပေးတဲ့ သူဌေး | Buzzy
ကိုယ်အလေးချိန် ချနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်းကို ဒေါ်လာ ၁၄ဒေါ်လာစီမုန့်ဖိုးပေးတဲ့ သူဌေး
တရုတ်ပြည်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကတော့ သူ့ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ၀ိတ်လျှော့ချင်လာအောင် တကယ်ကို အကျိုးအမြတ်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ရှန်စီး ပြည်နယ်မှာတည်ဆောက်ထားပြီး Xian Jingtian လို့ခေါ်တဲ့ ချေးငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကတော့ ၀ိတ်ကျအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ငွေသားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ စနစ်အသစ်တစ်ခုကို အသက်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ သူဌေး Wang Xuebao ပြောကြားချက်အရ ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဓလေ့ထုံးတမ်း တစ်ခုဖြစ်လာဖို့နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတော်တော်များများဟာ တစ်နေရာထဲမှာအကြာကြီး ထိုင်နေပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေရတာကြောင့် များများ စားစား လှုပ်ရှားမှု့ဆိုတာ သူတို့မှာ မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တွေ သူတို့တိုးလာကြပါတယ်။
တရုတျပွညျက စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦးကတော့ သူ့ရဲ့ ၀နျထမျးတှေ ၀ိတျလြှော့ခငျြလာအောငျ တကယျကို အကြိုးအမွတျကောငျးတဲ့ နညျးလမျးကိုရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတော့တယျ။ရှနျစီး ပွညျနယျမှာတညျဆောကျထားပွီး Xian Jingtian လို့ချေါတဲ့ ခြေးငှလေုပျငနျးဆိုငျရာ ကုမ်ပဏီကတော့ ၀ိတျကအြောငျစှမျးဆောငျနိုငျတဲ့ ၀နျထမျးတှကေို ငှသေားလကျဆောငျပေးတဲ့ စနဈအသဈတဈခုကို အသကျသှငျးလုပျဆောငျသှားတာဘဲဖွဈပါတယျ။
ကုမ်ပဏီရဲ့ သူဌေး Wang Xuebao ပွောကွားခကျြအရ ဒီအစီအစဉျရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြကတော့ ဓလထေုံ့းတမျး တဈခုဖွဈလာဖို့နှငျ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေကေောငျးမှနျလာစဖေို့အတှကျ ဖွဈပါတယျလို့ သိရပါတယျ။ကုမ်ပဏီက ၀နျထမျးတျောတျောမြားမြားဟာ တဈနရောထဲမှာအကွာကွီး ထိုငျနပွေီးတော့ အလုပျလုပျနရေတာကွောငျ့ မြားမြား စားစား လှုပျရှားမှု့ဆိုတာ သူတို့မှာ မရှိတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျတှေ သူတို့တိုးလာကွပါတယျ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနေနဲ့ စိတ်များစွာမကောင်းဖြစ်ရတာကြောင့် ကျန်းမာဖို့ ၀ိတ်ချစို့ ဆိုတဲ့ ဒီစနစ်လေးကို ပြုလုပ်ပေးရတာပါလို့ သူဌေးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ကထဲက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ကျဆင်းသွားတဲ့ ကီလိုဂရမ်တိုင်းအတွက် ဒေါ်လာ ၁၄ဒေါ်လာစီ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးသော ၃ကီလိုဂရမ်ကနေ စကျရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃ကီလိုဂရမ်ဆိုတာဟာ ပေါင်အနေနဲ့ တွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ၆.၆ပေါင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။သူဌေးရဲ့ ပြောပြပုံအရတော့ ဒီစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးတဲ့ အချိန်ကထဲက သူ ကိုယ်တိုင်ဝိတ်ကျချင်ပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိ မကျသေးကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် သူဝိတ်မကျသော်လည်း သူ့ရဲ့ ၀န်ထမ်းအချို့မှာတော့ ၄၄ပေါင်အထိကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒေါ်လာ ၂၉၀ အထိတောင်ရရှိနေသူတွေ ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ၀မ်းသာမိကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်.
တကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ပါဘဲ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောအနနေဲ့ စိတျမြားစှာမကောငျးဖွဈရတာကွောငျ့ ကနျြးမာဖို့ ၀ိတျခစြို့ ဆိုတဲ့ ဒီစနဈလေးကို ပွုလုပျပေးရတာပါလို့ သူဌေးကပွောပွခဲ့ပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ကထဲက စတငျခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ ကဆြငျးသှားတဲ့ ကီလိုဂရမျတိုငျးအတှကျ ဒျေါလာ ၁၄ဒျေါလာစီ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အနညျးဆုံးသော ၃ကီလိုဂရမျကနေ စကရြမှာဘဲဖွဈပါတယျ။ ၃ကီလိုဂရမျဆိုတာဟာ ပေါငျအနနေဲ့ တှကျရမယျဆိုရငျတော့ ၆.၆ပေါငျဘဲဖွဈပါတယျ။သူဌေးရဲ့ ပွောပွပုံအရတော့ ဒီစနဈကို အကောငျအထညျဖျောပွီးတဲ့ အခြိနျကထဲက သူ ကိုယျတိုငျဝိတျကခြငျြပမေယျ့လညျး အခုခြိနျထိ မကသြေးကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ သူဝိတျမကသြျောလညျး သူ့ရဲ့ ၀နျထမျးအခြို့မှာတော့ ၄၄ပေါငျအထိကသြှားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒျေါလာ ၂၉၀ အထိတောငျရရှိနသေူတှေ ရှိနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ ၀မျးသာမိကွောငျးပွောပွခဲ့ပါတယျ.
တကယျကို ကောငျးမှနျတဲ့ အတှေးအချေါပါဘဲ။